विश्व चकित पार्दै चिनले विश्वभर फ्री वाइफाई उपलब्ध गराउदै, यसरी हुनेछ सम्भव - Online Palanchok
विश्व चकित पार्दै चिनले विश्वभर फ्री वाइफाई उपलब्ध गराउदै, यसरी हुनेछ सम्भव
एजेन्सी । प्रविधीमा क्रान्ति गरिरहेको चिनले फेरी अर्को चमत्कार गर्ने भएको छ एक । चीनियाँ कम्पनीले विश्वभर निशुल्क वाईफाई उपलब्ध गराउँने तयारी गरेको छ । विश्वभर निशुल्क वाईफाई उपलब्ध गराउने तयारीमा चिनीयाँ एक इन्टरनेट कम्पनीले उपग्रह लिएर आएको छ ।
विश्वभर यसको उद्‌घाटन भने आउँदो बर्ष हुने बताइएको छ । उपग्रह चीनको पश्चिमउत्तरमा रहेको गाँन्सु प्रान्तमा जियुकान सेटेलाइट लञ्च सेंटरमा आउँदो बर्ष उद्‌घाटन गरिने भएको लिंकश्योर नेटवर्क कम्पनीले जनाएको छ । मानिसहरुको इन्टरनेटमा पहुँच बढाउँन सेटेलाइटको विकल्प नहुँने भन्दै गुगल, स्पेस एक्स, वेन वेइभ लगायतका कम्पनीले पनि विश्वभर फ्रि वाईफाइका लागि योजना अघि बढाएका छन् । २०२० सम्म अन्तरिक्षमा यस्ता १० उपग्रह र २०२६ सम्म २ सय ७२ उपग्रह हुनेछन् ।
पिपुल्स डेलीमा प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार, उपग्रह द्वारा उपलब्ध गराइने इन्टरनेट सेवा सबैले सजिलो तरिकाले उपयोग गर्न सक्नेछन् । यो सेवा प्रयोगकर्ताले आफ्नो मोबाइल फोनबाटै उपयोग गर्न सक्नेछन् । रिपोर्टका अनुसार, लिंकश्योरका कार्यकारी निर्देशक (सीईओ) वांग जिंगयिंगले कम्पनीले यो परियोजनामा तीन अरब युआन खर्च गर्ने बताइन् । कम्पनीको वेबसाइटले बताए अनुसार चिन लगायत २२३ देशमा ९०० मिलियन बढी प्रयोगकर्ता छन् ।
सार्वजनिक भयो मंगल ग्रहको आवाज ! मंगल ग्रहको आवाज पहिलो पटक सुन्न सकिने ! [भिडियो सहित]
झुक्किएर पनि मोबाइलमा यी ४ कुरा सेभ नगर्नु गरे सजिलै हुन्छ लिक, हुनेछ जीवन बर्वाद ! जानी राखौ
हराएको मोबाइल कहाँ छ भन्ने यसरी एक मिनेटमै आफैँ पत्ता लगाउनुहोस् (तरिकासहित)
फेसबुकले थप्यो नयाँ सुविधा सबैले धेरै नै मन पराउने सुविधा पाउनेछन – हेर्नुहोस त्यो सुविधाबारे [पढेर सेयर गर्नुहोला]
गाउँघरमा मोबाईल चार्ज गर्ने कुनै साधन छैन भने यसरी केरा र स्याउँ बाट पनि केही हदका लागि चार्ज गर्न सकिने
यसरी सजिलै सँग वाइफाईको तरिका सिक्नुहोस‘
Prevएक्सनमा साउथ इन्डियन स्वादसहित रिलिज भयो नेपाली फिल्म ‘रणवीर’को टिजर (भिडियो सहित्)
Nextरोजगारीका लागि यी ५ देश जानुहोस्, भनिन्छ यी देशहरूमा भाग्य चम्किनेछ …कुन-कुन देश हेर्नूहोस शेयर गर्नुभोस ।